काँग्रेसले ४५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटायो, को कहाँ ? – News Portal of Global Nepali
काँग्रेसले ४५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटायो, को कहाँ ?
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसले दोस्रो चरणअन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको तयारीका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले दोस्रो चरणअन्तर्गत यही मंसिर २१ गते निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै पार्टीले धनुषामा बजरङ्ग नेपाली, महोत्तरीमा स्मृतिनारायण चौधरी, सर्लाहीमा रामचन्द्र तिवारी, काठमाडौँमा प्रेमबहादुर खड्का, भक्तपुरमा कमला पन्त, ललितपुरमा डा राजाराम कार्की, काभ्रेमा बहादुर सिंह (लामा) तामाङ, मकवानपुरमा जीवनप्रेम श्रेष्ठ, रौतहटमा गणेशचन्द्र तिमल्सिना, बारामा राजकृष्ण अमात्य, पर्सामा	शोभाकर पराजुली र चितवनमा भीम ढुंगानालाई खटाएको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो ।